पर्समा यी ५ मध्ये एक चीज राख्नुहोस्: कहिलै हुँदैन् पैसाको कमी ! जानी राखौ « Nepal's number 1 Entertainment news portal
पर्समा यी ५ मध्ये एक चीज राख्नुहोस्: कहिलै हुँदैन् पैसाको कमी ! जानी राखौ
Published : 29 July, 2020 12:32 pm
धेरै भन्दा धेरै धनसम्पति कमाउने चाहाना कसलाइ नहोला र ? जसको लागि मानिसहरू कडा मेहेनत गर्न पछि हट्दैनन । तर लाखैा कोशिस गर्दा पनि हातमा पैसा टिक्दैन । समुद्र शास्त्रमा यो बताइएको छ कि केही खास चीज यदि गोजीमा राख्नाले धन सम्पति टिकाउ हुने गर्दछ। यी पाँच चीजहरू गोजीमा राख्नाले तपाइको गोजी कहिले खाली हुने छैन।
-आफ्नो पर्स मा धनकी देवी माता लक्ष्मी को तस्बिर राख्नुहोस। माता लक्ष्मी को कृपाले तपाइको आफ्नो पर्स कहिले खाली हुने छैन।
-आफ्नो गोजीमा कमलको दाना अर्थात् कमलको बिजको दाना राख्नाले तपाइसग पैसा को कमि कहिँले हुने छैन।
-पर्समा अक्षता राख्नाले पनि बडि भन्दा बडी फाइदा हुन्छ। भनिन्छ कि पर्समा थोरै चामल राख्नले फजुल खर्च रोकिन्छ।
-गोजीमा श्रीयंत्र राख्नले पैसा सग जोडिएका सबै काम कुराहरुमा फाइदा मिल्दछ। यसलाई सधै आफ्नो पर्स मा राख्नुहोस।
-पर्समा सानो ऐना राख्नाले पनि धनको बचत हुन्छ। तपाइको पैसा फजुलमा खर्च हुने छैन ।
श्रीमानको हत्याको आरोपमा श्रीमती पक्राउ।
सिरहाको गोलबजार नगरपालिका–४ निपनिया कुटीका ३९ बर्षीय दुखहरण महराको हत्यामा उनकै पत्नीको संलग्नता देखिएको प्रहरीले